Buy Simoniz fix it (20,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
Mong Hsu ရှမ်းပြည်နယ်
Mong Kung ရှမ်းပြည်နယ်
Keng Tung ရှမ်းပြည်နယ်
Taik Kyi ရန်ကုန်တိုင်း
Dagon Myothit(East) ရန်ကုန်တိုင်း
Ka Naung ဧရာဝတီတိုင်း
Simoniz fix it
ရောင်းချသူ: Rocket Online Shopping
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 274ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်: 94 (+ 1 )
Fix it Pro ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တဲ့ Simoniz fix it
ကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။
အစင်းကြောင်းများကို လွယ်ကူစွာ ဖျော်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွယ်ကူစွာ သုတ်ဖို. မော်တာ ဒလိမ့်တုံးအသေး လေးလည်း ပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားပူနေရင်၊ အစင်းကြောင်း အရာကြီးများတော့ မပျောက်နိုင်ပါ။
color မရွေးသုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း – ၂သောင်း
Delivery free in Yangon
ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ်
နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ်
တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။
09264686461 (Male) also viber
09768484878 (Female) also viber
Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။
ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။
09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။
Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ)
ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့်
:( ဤကြော်ငြာသည် မရှိတော့ပါ
ကား ဆိုင်ကယ် ခြေရာခံစနစ် GPS
CNG 70L အိုး​ရောင်းမည်​
အမည်: Simoniz fix it
ရန်ကုန်တိုင်း , ကမာရွတ်
+ SubmitaFree Ad အကောင့်အသစ်ဖွင့်မည်